Umzimba oMncinci I-Big Breast 160CM yoThando ngeDolls yeMorton
Amabele amakhulu esini,G indebe yoonodoli besini,Oonodoli besini abancinci
Morton-160CM Busty Girl Ngaphandle Kokucinga Ngomzimba Omncinci I-TPE Yesondo
Ibhanti: Idola ye-AXB
Ubushushu Intelligent: *
Ewe (+ $ 60)
Imfuno (+ $ 60)
Iidoli zesini se-AXB zinokwenziwa ngokubanzi kwiintsuku ezi-3-6. Abaqambi abanamava banokubonelela ngokupakisha okunomtsalane ngexesha elifutshane. Iidoli zothando zihlala zisebenzisa ezona ndibano zingcono. Iqela lolawulo lomgangatho lihlala liqhuba uhlolo oluzimeleyo kunye nokuhlola kumda wendibano kunye nendawo yokugcina ngaphambi kokuthunyelwa ukuqinisekisa umgangatho we-100%. Zonke iimveliso zifumene isatifikethi se-CE, kwaye iqela liphela liya kuzama konke okusemandleni alo ukubonelela ngeenkonzo eziphezulu kubo bonke abathengi.
❤ Oonodoli bethu bokwenene benziwe ngesilicone yezonyango ekhuselekileyo nengabiyityhefu, ephantse ithambe njengabantu bokwenyani.
❤ Sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo zothando loonodoli bobukhulu obahlukeneyo kunye nezitayile.
Ubunzima :: 48kg
Ubude bengalo: 62cm
Ubude bomlenze: 78cm
Ubude bamagxalaba: 34cm
Ubunzulu lobufazi: 17cm
Ubunzulu bobuchwephesha: 14cm
Ubunzulu bomlomo: 10cm
I-Elsie - 160CM Ubungakanani obuPhakathi beBele laseTshayina iNtombazana eNtsha yamaPolisa ...
Ukuzibophelela kwethu: Oonodoli besini be-AXB banokwenziwa ngokubanzi kwiintsuku ezi-3-6. Abaqambi abanamava banokubonelela ngokupakisha okunomtsalane ngexesha elifutshane. Iidoli zothando zihlala zisebenzisa ezona ndibano zingcono. Iqela lolawulo lomgangatho lisoloko liqhuba uhlolo oluzimeleyo kunye nokuhlola kumgca wendibano kunye nokugcinwa ...
Ukukhulisa-i-158CM enkulu isifuba Iintsana eziNtsomi eziBalaseleyo kwi-TPE AXB yesondo D ...
UNatalie-157CM uTitshala wabucala oFundisa ngoSondo ngokuFundisa iRatio egqibeleleyo ye-TPE S ...
UMelissa - 157CM Amantombazana amancinci amhlophe amaBanqana amaNqatha amaNqatha eTpe ...
Flat Chest Mnyama Amehlo Amakhulu Amantombazana amaJapan Akumi Hakumi 155cm TPE S ...
Igama leprofayili yakho: Akumi Hakumi Isini: Isini sabasetyhini: Umntu ophakathi: ongenatyala, odlamkileyo, nokuzonwabisa okulula: Isilwanyana esincinci, umvundla, English Umsebenzi: Ubuzwe babafundi: IJapan ilungele isihlwele: Ukukhangela iintombi, amaqabane ...
Hodgson - 165CM Ukuzihombisa okuFanelekileyo Ukuncuma kweNgelosi Ukunyanga ubulolo T ...
UDouglas - 165CM Intombazana yaseAsia eneenwele ezinde ze-Mistress yeYoga TPE ...
UJoyce - 165CM Ubuso Obukhulu Intombazana yaseMpuma Ubuhle obuBuchule Ebuhleni be-TPE S ...
UBauer - 165CM Amabele ajikelezayo amabele amancinci i-Blond Curly Hair TPE yesondo ...
I-Hopkin-165CM yaseKorea Udade oMkhulu weeBoobs ezichanekileyo zokuChukumisa ikamva ...
Unodoli wexesha elizayo
Ukuzibophelela kwethu: Ii-Urdolls zikunika oonodoli abakumgangatho ophezulu besini abenziwe ngumenzi wengcali weFuturegirl. Unodoli wothando we-brandgirl wenziwe ngezinto ze-TPE. I-brand izibophelele ekwenzeni oonodoli besini be-TPE ngamaxabiso asezantsi kunye neemveliso ezisemgangathweni ophezulu. Siqinisekisa ukuba uya ...